Windows 10 ichawedzera kumisikidza kuiswa kweimwe OS | Linux Vakapindwa muropa
Hongu kuWindows 10, uye kwete kuLinux (Yakachengeteka Boot 2.0 nyaya)
Ndiwo unoita kunge ndiwo mubvunzo unotigadzirira Microsoft ine vhezheni yayo itsva yeWindows 10. Uye zvinoita sekunge Microsoft iri kuda kupera kamwechete uye zve vese nemakwikwi ari pa desktop. Kutanga zvakaziviswa kuti Microsoft inobvumidza kukwidziridzwa kuWindows 10 yemahara kunyangwe kune avo vane pirated Windows uye ikozvino izvi ...
Microsoft yasvika yakavhurwa sosi software pamwe nemamwe mapurojekiti ayo ekuti vanhu vaide, inewo kubheja zvakanyanya pamakosi ekuvandudza, Redmond mafambiro ekupa, nezvimwe. Zvese kupidigura chimiro chakashata chekambani uye ipa bhero hombe neWindows 10.
Iine Windows 8 uye iyo yakakurumbira UEFI Yakachengeteka Boot, ikozvino zvinoita sekuti mukati Windows 10 zvinotora rimwe danho muzvipingamupinyi zvaro kuisa mamwe masisitimu anoshanda uye kutomanikidza vagadziri kuti vasape mukana wekuimisa sekare. Nechikonzero chekudzivirira iyo inoshanda sisitimu kubva kune malware kune yayo isina kuchengetedzeka mashandiro, ivo vava kuita sevanoda kukwevera pamusungo uyu.
Zvirinani ndizvo zvinotaurwa naAss Technica, Kuona kuti chinodiwa chekuita Yakachengeteka Bhutsu sarudzo ichabviswa uye vagadziri havazosungirwa kupa iyi sarudzo kuti vatore logo yakazivikanwa neMicrosoft yekuisa mune zvigadzirwa zvavo. Neraki zvinoita sekunge havazi vese vagadziri vachatora chiyero ichi, asi kana vamwe vakatora, yatove muganho kune vashandisi veLinux vanoda dualboot.
Asi hei ... isu takatotaura zvakawanda munguva yakapfuura nezve Secure Boot uye akawanda ma distros akagadzirira izvo, saka nharaunda inovandudza mamwe emahara mashandiro masisitimu, kwete Linux chete, ichafanirwa kuramba ichirwisa zvakaoma zvichipesana nezvinofungwa nevamwe. Kumirira kwenguva refu kutsiva kweiyo BIOS shoma (iyo maPC aitsamira kushanda neWIndows) uye ikozvino apo UEFI inotarisirwa inosvika vanomanikidza Bhokisi Rakachengeteka patiri… inyaya isingagumi.
Sokutaura kwakaita Jerry Sanders (mumwe wevatangi veADD) kamwe, kune mamwe mamonopi anokwanisa kumanikidza masangano ehurumende kuti asimbise mitemo yavo uye vabatsirwe navo. Zvinotaridza kuti hapana munhu anoda kumisa kuita kusarongeka kusingakurudzire kukwikwidza kwakanaka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Hongu kuWindows 10, uye kwete kuLinux (Yakachengeteka Boot 2.0 nyaya)
Izvo hazvisi izvo zvinomanikidza vagadziri kuti varege kuimisa, asi asi kuti ndiyo sarudzo yevagadziri kuti vabvumire deactivation kana kwete.
Zvisinei, kana isu tichifunga kuti vagadziri vane husimbe ...
Pindura kune spanishbizarro
Asi, ndinofungidzira kuti kana isu tine komputa ine bhutsu "yakavhurwa" hatizove nedambudziko, handiti?
Ndokumbirawo musavhunduke kudaro, isu vedu vanoshandisa GNU / Linux distro ticharamba tichidaro kunyangwe Microsoft ikauya kuzotisiira rezinesi remahara kumba. GNU / Linux yatove nenharaunda yayo nemauto evashandisi pasirese, isu tichaenderera kuti hongu, tisinga pfuure 1 kana 3% yemusika wedesktop, asi iwe unofanirwa kunzwisisa kuti Microsoft yakatove yakamisikidzwa mumusika uyu uye mukana wacho wakakura. Kune vamwe vese kune vanhu vazhinji vasingade kudzidza kushandisa GNU / Linux uye zvakare hatigone kumanikidza OS yedu nechisimba, muchidimbu ini ndichiri netariro uye ndichiri kufunga kuti GNU / Linux ichagara iripo kune avo vari wakadyiswa nehutachiona, fomati, zvikanganiso kwese kwese, kusagadzikana nezvimwe. Chekupedzisira ndinofunga kuti iyo "yemahara" inozopedzisira yave yekutanga windows chimwe chinhu senge windows 7 Starter mausingazokwanise kana kuchinja iyo Wallpaper pane desktop yako uye izvo izvo zvinokuudza kuti ivo vanofanirwa kubhadhara iyo vhezheni yepamberi kana imwe yakaburitswa vhezheni nezvimwe, pakupedzisira ini ndinofunga kuti vashandisi veWindows vanozopedzisira varemerwa kupfuura pavaishandisa pirated vhezheni yacho.
baba musazvinetse, windows 10 hapana anochida, munhu wese achachengeta iyo 7
Pindura kuna adrian
Chero zvazvingaitika, iyo Windows OS inozopedzisira yabiwa, kune mamwe mabheti kana "kusimudzira" vanoiisa. uye kuti Linux igamuchirwe neruzhinji, inofanirwa kunge iri "yakaoma" kune vashandisi vatsva kana kuti inoyerera zvakanyanya senge windows (zviripachena kana ichiibvumira) maererano nevatyairi kana zvinhu zvakadaro.
Leandro Paez akadaro
asi ndapota, ndiani tsoko nyani akanyora nhau?
Izvo hazvichazove zvekumanikidzirwa kukwanisa kuimisa.
Asi ngatifungei kuti Windows 8 yakamisikidza kuti Yakachengeteka Boot inogona kuremara. Mune mamwe mazwi, vanaamai vese vari muUFI yavo vanobvumidza izvozvi, ndiani mugadziri wamai mupfungwa dzavo chaidzo angachinjazve izvozvi nguva ino kuti bhutsu yakachengeteka irege kuremara?
Zvingave kuzvipfura iwe netsoka
Pindura kuna Leandro Páez
Chekutanga pane zvese, taura kuti iyo "diki tsoko" haina basa. Unogona kupokana kana kupokana usingatuke.
Yechipiri, sekutaura kwangu muchinyorwa, handifunge kuti idambudziko, nekuti kune ma distros anoitsigira. Dambudziko ndere mamwe ma distros kana emahara mashandiro ekushandira asingatsigire ... Microsoft iri kudzora rusununguko nezviito izvi.
Chechitatu, vagadziri zviri pachena kuti havasi mapenzi. Asi Microsoft inogona kushandisa kumanikidza kwakawanda, zvingave zvematongerwo enyika kana nebhuku rekutarisa.
Uye ini ndinopa muenzaniso, apo AMD K8 microarchitecture yakavhurwa, vazhinji vagadziri vakazivisa kuti vaizoishandisa. Mukupedzisira vamwe havana uye vamwe vachiri neiyo yakazara repertoire yeIntel machipisi uye chete mashoma mamodheru ane AMD. Mune ino kesi vagadziri vaive vasina kupusa uye vasina kufunga kuzvipfura mumakumbo. Asi mari uye kumanikidzwa kwakakunda, kunyangwe Intel yanga iine monopoly zvichemo ...
Kana uri kuseri kwechimwe chinhu iIntel, Microsoft kana Apple… haufanire kunge wakajeka nezvezvinhu.
Uye ini ndinodzokorora zvakare kana mumwe munhu achinge awana kuomerwa nekuzvinzwisisa: Handifunge kuti izvi zvinokanganisa zvakanyanya Linux kana mamwe masisitimu akadai seFreeBSD, asi chipingaidzo chitsva chinoratidzwa uye icho hachingokanganisi Microsoft chete, asi zvinobatsira.
Uye zvakare, hupenzi kufunga kuti izvi zvinoitika mune chimwe chikamu uye zvakadaro zvinoitika mune ino. Pane chero munhu angafungidzira Mercedes vachisundira peturu kuti ive neyakagadzirwa uye yakagadziridzwa injini dzayo, ichisiya vamwe vatyairi vemudhudhudhu? Kwete.
Ini pachangu, ini ndoda kushandisa Linux, nekuti hutachiona hwacho hwakasarudzika mune urwu rudzi rwechigadzirwa, kunyangwe kana iine rezinesi remahara, unofanirwa kutenga antivirus iyo isingadhuri zvakanyanya woita mapepa akawanda kuti vasadaro kukukuchidzira, panguva ino mafomu mazhinji anoshanda nemazvo paLinux.
Clipit: gadzirisa clipboard zviri nyore pane yako Linux kugovera
Windows 93: vhezheni yekuseka Windows